Leli kungaba yithuba lakho lokuthenga impahla eyigugu elingaka yezindlu. Zonke izinsiza ezibalulekile nezinsizakusebenza zenziwa zitholakale eNyakatho Nazimabad. Nayi iNdlu oyikhethe ngobuhlakani. INorth Nazimabad - IBlock H ihlala ishintsha futhi kuvela amathuba amasha kubahlali nsuku zonke. Ufuna isikhala esihle nokuthengiselana okuhle? Ungabe usaqhubeka ngoba sikunikeza amathuluzi adingekayo ukwenza wonke amaYadi ayizikwele angama-233 ale ndawo abe yindawo yakho elandelayo. Le ndawo itholakala ngama-Rs 30,500,000. Uzocindezelwa kanzima ukuthola isivumelwano esingcono. Uma ufuna imininingwane, okumele ukwenze ukuxhumana nathi.